Kim Zolciak-Biermann anoti kurambana haisi sarudzo - Nhau
Kim Zolciak-Biermann anoti kurambana 'haisi sarudzo'
Kim Zolciak -Biermann haasi kuzobatana nerondedzero ye 'Chaivo Vemadzimai Edzimba' vakarambana chero nguva munguva pfupi.
'Haisiyo sarudzo mumba mangu,' Kim akaudza Fox News yekugona kurambana nemurume wake, Kroy Biermann.
Kim naKroy vave vakaroora kweanoda kusvika makore matanhatu uye vane vana vana pamwechete - Kaia, Kane, Kroy Jr. naKash - pamusoro pevana vaKim kubva kuhukama hwekare, vanasikana Brielle naArianna. Ivo vaviri vakatora hupenyu hwavo pachiratidziro chake, 'Usanonoka,' kwemwaka mitanhatu, uye Kim anoronga kujoina zvakare 'Ivo Vechokwadi Vemadzimai eAtlanta' inguva yegumi.
ndiani ane vivica gava akadanana
'Ini handingatombobvumidza show kuti ikanganise imba yangu munzira ipi neipi,' ane makore makumi matatu nemapfumbamwe akatsanangura. 'Imba yangu ndeyekutanga.'
mariah anotarisira mutsva wekubata mhete
Iyo chaiyo nyeredzi yakaratidza chikonzero nei kwevamwe vevamwe vakadzi kubva kufranchise - saLuAnn de Lesseps, Bethenny Frankel, Yolanda Hadid, Porsha Williams naCamille Grammer - vakarambana kubvira pavakatanga kuzviratidza pamitambo yavo yeBravo. Vati vanotenda kuti vangangodaro vakaparadzana nevarume vavo nekuda kweiyo `` hype yeTV nekushambadzwa '' uye nekuti vanogona kufunga kuti 'zviri nyore kurambana' pane kugadzirisa matambudziko muwanano.
Kuwedzera pakuisa muchato wake pamberi pezita rake chairo, Kim akagovanawo matipi ake ekuchengetedza imba yake muhungwaru.
'Anopisa kwazvo - izvo zvinogara zvichibatsira,' akadaro. 'Ndinongotenda kuti tinovata vana na8 o'clock, tine maawa mashoma [toga].'
jenny ane makore mangani kubva pakubhururuka
Chinyorwa chakagovaniswa na Kim Zolciak-Biermann (@kimzolciakbiermann) pana Jun 4, 2017 pa5: 54 pm PDT
Vaviriwo vakavandudza mhiko dzavo muna Chivabvu, makore manomwe mushure mekunge vasangana pachiitiko cheDancing With Atlanta Stars. Panguva iyoyo, Kim akagovana mafoto ake naKroy vakapfeka zvipfeko zvemuchato, pamwe nepfuti dzevana vavo vese vakapfeka pamhenderekedzo yegungano.
Lin-Manuel Miranda anodzokera kuTwitter mushure mekumisikidza account kune vamwe
Jesse James anogadzira pfuti yakasarudzika yeMutungamiri Trump, uye unofanirwa kuzviona
Islaisher uye sacha baron cohen
amber akasimuka uye wiz khalifa
ndiani John corbett akaroorawo
35 karat diamond ring ring
Heidi klum inowira muAmerica tarenda
janet akaroorwa kangani
danny pintauro semwana